COVID-19 ကပ်ရောဂါ ဆိုက်နေချိန် နောက်ကြောင်းမရှင်းတဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေ ကရင်ပြည်နယ်မှာ မြို့သစ်တွေ တည်ဆောက်လာတာဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတောင် ခြိမ်းခြောက်နိုင်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံး ယာယီတာဝန်ခံဟောင်း Priscilla Clapp က လေ့လာဆန်းစစ်ချက်တစောင် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး Priscilla Clapp ကို ဦးကျော်ဇံသာ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် (ပထမပိုင်း) ကို တင်ပြထားပါတယ်။
မေး ။ ။ COVID-19 ကပ်ရောဂါ ဖြစ်နေချိန်မှာ နောက်ကြောင်းမရှင်းတဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေ ကရင်ပြည်နယ်မှာ သီးသန့်နယ်မြေ ထူထောင်နေကြတာ ဒါက ငြိမ်းချမ်းရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေတယ်ဆိုတော့ အတော့်ကိုထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့ သိထားတာက ရွေကုက္ကိုလ်မြို့ တော့ သိပါတယ်။ ကျန်တဲ့မြို့ တွေအကြောင်းတော့ ကျနော်တို့ မသိပါဘူး။ အဲဒါကို နည်းနည်းဆက်ပြောပါ။
ဖြေ ။ ။ အထူးသဖြင့် ဒီမြို့ သစ်ကြီးနှစ်မြို့  တည်ဆောက်လိုက်တာဟာ သိပ်ကိုစိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ သောင်းကျန်းနေတဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် တရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုဏ်ဝင်တယောက်က ဦးဆောင်ပြီးတော့ ဒီမြို့ သစ်တွေကို တည်ဆောက်နေတာပါ။ သူတို့တွေက မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်တယ်။ လူကုန်ကူးတယ်။ လူသတ်တယ် စတဲ့ ဒုစရိုက်မျိုးစုံကို လုပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမြို့ သစ်တွေ တည်ထောင်ဖို့အတွက် ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်နဲ့ နောက်ထပ်သဘောတူစာချုပ် ရေးထိုးလိုက်တဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဟာဆိုရင် မကာအိုမှာ လူသတ်ခဲ့လို့ တရုတ်ပြည်မှာ ထောင် (၁၃) နှစ် ကျခဲ့တဲ့ လူသတ်တရားခံ ဖြစ်ပါတယ်။ သူရေးတဲ့ သူ့ရဲ့ ဘဝမှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဆိုရင် လူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ရေးထားပါတယ်။
မေး ။ ။ အရှေ့ တောင်အာရှက ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာလည်း Sihanoukville ဆိုပြီး မြို့ သစ်တစ်မြို့ ကို တရုတ်က တည်ဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ သိပါတယ်။ အပေါ်ယံအားဖြင့်တော့ တော်တော်ကို စည်းစည်းကားကား ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ သိရပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီနေရာမှာ ဘယ်လိုပြဿနာတွေ ရှိခဲ့လဲ။ ရှိခဲ့တယ့်ဆိုရင်ကော ဘယ်လိုပြဿနာတွေဆိုတာကို နည်းနည်းပြောပြပေးပါ။ ဆက်စပ်ပြီးတော့ သိရအောင်ပါ။
ဖြေ ။ ။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ Sihanoukville မြို့ သစ်ထောင်တုန်းက သူခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ ရာဇဝတ်မှုမျိုးစုံကို ကျူးလွန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်က တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကို အကူအညီတောင်းပြီးတော့ နှိမ်းနင်းခဲ့ရတဲ့အထိပါပဲ။ တရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုဏ်တွေ လက်ချက်နဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားရဲတွေ လမ်းမပေါ်တွေမှာ အတုံးအရုံး သေဆုံးနေတဲ့ပုံတွေကို အင်တာနက်မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေက တရုတ်ဂိုဏ်တွေရဲ့  ရက်စက်ပုံတွေကို အင်တာနက်ကနေ အခမဲ့ ကြော်ငြာပေးနေသလိုပေါ့။ ဒါကြောင့် ဒီနမူနာတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့  တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့တွေက ဒီလိုမြို့ သစ်တွေမှာ ပြစ်မှုတွေ ကျူးလွန်နေတဲ့ တရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းတွေကို လက်လှမ်းမီနိုင်ပါ့မလားလို့ စိုးရိမ်မိတာပါ။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကနေ တပ်ခေါက်ပြီး ပြေးလာတဲ့ တရုတ်တွေက အခု ကရင်ပြည်နယ်မှာ မြို့ သစ်ထောင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ အခုမြို့ သစ်တွေ လုပ်နေတဲ့နေရာဘက်မှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ တိုက်ပွဲတွေလည်း မရှိတော့ဘူး မဟုတ်လား။ အဲဒီတော့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတွေ လုံးဝရယူထားပြီ ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ဒီအချိန်မှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုက လုံးဝမရှိနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။
ဖြေ ။ ။ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တဝိုက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရထားတဲ့ အပစ်ရပ်အဖွဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ DKBA က တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတာဝန်ကို အဓိကတာဝန်ယူထားရတဲ့သဘော ဖြစ်နေတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ တရုတ်တွေက တမင်အခွင့်ကောင်းယူတာပေါ့။ ဒုတိယမြောက် မြို့ သစ် ဆောက်လုပ်နေတဲ့ KNU နယ်မြေမှာလည်း ဒီသဘောပါပဲ။
မေး ။ ။ နောက် Priscilla ရေးထားတဲ့အထဲမှာ ဒီမြို့ သစ်စီမံကိန်းတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု (MIC) ရဲ့  သဘောတူညီမှုနဲ့ မြန်မာလွှတ်တော်ရဲ့  သဘောတူညီမှုကော အသိအမှတ်ပြုမှု ရယူထားခြင်း မရှိဘူးလို့ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ ဒီ စီမံကိန်းတွေ စတင်လာခဲ့ပါလဲ။
ဖြေ ။ ။ အားလုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကရင်ပြည်နယ်တွင်းက မြေလွတ်မြေရိုင်းနေရာတွေမှာ အိမ်ယာတွေ တည်ဆောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ မြန်မာ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကနေ ပထမစီမံကိန်းအတွက် ပဏာမ သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့တာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်တွေက သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြေအကျယ်အဝန်းထက် ပိုတိုးချဲ့ ပြီးတော့ Casino လောင်းကစားရုံတွေကိုပါ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။ နေပြည်တော်က အရပ်သားအစိုးရမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ရှိတယ်လို့ ကျမ မထင်ပါဘူး။ သူတို့နဲ့ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကို ပြောပြဖို့ကလဲ ခက်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်နဲ့ တခြားဒေသက အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့  ကိုယ်စားဆိုပြီးတော့ ကရင်ပြည်နယ်အတွက် ငွေကြေးနဲ့ ဆေးပစ္စည်းတွေကို ဝန်ကြီးချုပ်ဆီကနေ မျက်နှာသာရအောင် လှုဒါန်းနေတာတွေ ရှိပါတယ်။ ယူနန်အစိုးရနဲ့ ပတ်သက်နေတာလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ တပ်အပ်တော့ မပြောနိုင်ပေမယ့် ဆန်းတော့ဆန်းတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့။ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်က တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေ တရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းတွေကို ဘာမှမလုပ်ဘဲ လက်ပိုက်ကြည့်နေတာကတော့ စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းပါတယ်။
နယ်ခြားစောင့်တပ်ဆိုတာလဲ တပ်မတော်ရဲ့  လက်အောက်ခံ ပြည်သူ့စစ် ဖြစ်သလို၊ နယ်စပ်လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်က ဖြစ်ပါတယ်။ နယ်ခြားစောင့်တပ် လုပ်သမျှက တပ်မတော်နဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီမြို့ သစ်ကြီးနှစ်မြို့  တည်ဆောက်နေတဲ့ KNU ရဲ့  လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ စစ်တပ်က တနည်းမဟုတ်တနည်း ပတ်သက်နေတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဥပဒေဘောင်ပြင်ပကနေ KNU လုပ်ခွင့်ပေးထားနိုင်တာက စစ်တပ်ပဲ ရှိပါတယ်။
မေး ။ ။ အဲဒီလို တချို့ အရာတွေက ခွင့်ပြုချက်နဲ့ လုပ်တယ်ပဲ ထားပါတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘောင်အတွင်းက လုပ်ပြတာ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုကော အစိုးရက စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတာ monitory လုပ်တာကော မရှိဘူးလား။
ဖြေ ။ ။ နေပြည်တော်အစိုးရနဲ့ ကရင်ပြည်နယ် အရပ်သားအစိုးရဆီတို့မှာ ဒီမြို့ သစ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ရှိတယ်လို့ ကျမ မထင်ပါဘူး။ သူတို့နဲ့ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကို ပြောပြဖို့ကလဲ ခက်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်နဲ့ တခြားပြည်နယ်က အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့  ကိုယ်စားဆိုပြီးတော့ ကရင်ပြည်နယ်အတွက် ငွေကြေးနဲ့ ဆေးပစ္စည်းတွေကို ဝန်ကြီးချုပ်ဆီက မျက်နှာသာရအောင် လှုဒါန်းနေတာတွေ ရှိပါတယ်။ ယူနန်အစိုးရနဲ့ ပတ်သက်နေတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ တပ်အပ်တော့ မပြောနိုင်ပေမယ့် ဆန်းတော့ဆန်းတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့။ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်က တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း တရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းတွေကို ဘာမှမလုပ်ဘဲ လက်ပိုက်ကြည့်နေတာကတော့ စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းပါတယ်။
မေး ။ ။ အဲဒီလိုဆိုရင် ဒီကိစ္စမှာ တပ်မတော်၊ ဒါမှမဟုတ်လဲ အဲဒီဒေသမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်က သူတို့ကိုယ်တိုင် ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ ပြောနိုင်သလား။
ဖြေ ။ ။ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဆိုတာလဲ တပ်မတော်ရဲ့  လက်အောက်ခံ ပြည်သူ့စစ်ဖြစ်သလို၊ နယ်ခြားလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပါ။ နယ်ခြားစောင့်တပ် လုပ်သမျှ တပ်မတော်နဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့လဲ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လို့ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီမြို့ သစ်ကြီးနှစ်မြို့  တည်ဆောက်နေတဲ့ KNU ရဲ့  လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ စစ်တပ်က တနည်းမဟုတ်တနည်း ပတ်သက်နေတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဥပဒေဘောင် ပြင်ပကနေ KNU ကို လုပ်ခွင့်ပေးထားနိုင်တာကလဲ စစ်တပ်ပဲ ရှိပါတယ်။
မေး ။ ။ ကျနော် ဆက်စပ်ပြီး မေးချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ရှမ်းပြည်ဘက်မှာ အခြေစိုက်တဲ့ KIO ခွဲထွက်အဖွဲ့တဖွဲ့ သူတို့တွေလည်း အပစ်ရပ်ပြီးတော့ နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF လုပ်နေတယ်။ အဲဒီတပ်ဖွဲ့က တလောတုန်းက မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ တပ်မတော်က သူတို့ကို လက်နက်ဖြုတ်သိမ်း ထိန်းချုပ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခု ကရင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုရော ရာဇဝတ်မှုတွေ မကင်းတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့ ဒီက BGF ကို တပ်မတော်က အလားတူထိန်းချုပ်မှုတွေ မလုပ်နိုင်ဘူးလား။ ဘာကြောင့် မလုပ်တာလဲ။ သိရင် ပြောပါ။
ဖြေ ။ ။ မြန်မာပြည်ရဲ့  တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ကျမ ထဲထဲဝင်ဝင် မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီမြို့ သစ်တွေရဲ့  အခြေအနေက သိပ်အန္တရာယ် ရှိတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက စရေးထားတဲ့ ခြားနားတဲ့ မတူညီတဲ့ အစိုးရနှစ်ရပ် ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ပုံဖော်လိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။ တဘက်က တပ်မတော်အပါအဝင် လက်နက်ကိုင်တွေ ထိန်းချုပ်တဲ့ အစိုးရနဲ့ နောက်တဘက်က ပြည်သူတွေရွေးကောက်ထားတဲ့ အရပ်သားအစိုးရ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ခံအရပ်သားအစိုးရက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု စီးပွားရေးနယ်ပယ်ကို စနစ်တကျဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပြီးတော့ အထိုက်အလျောက် အောင်မြင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရလက်လှမ်းမမီတဲ့ နေရာတွေမှာ တခြားအဖွဲ့က ဥပဒေမဲ့ အခွင့်ကောင်းယူ၊ တိုးချဲ့ လုပ်ကိုင်နေတာကတော့ နိုင်ငံမှာ မတူညီ၊ ကွဲပြားခြားနားနေတဲ့ အစိုးရနှစ်ရပ် ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ပုံဖော်ပြသနေပါတယ်။
မေး ။ ။ Priscilla ရေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်ထဲမှာကိုက ဒီလုပ်ရပ်တွေက ငြိမ်းချမ်းရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေတယ်ဆိုတာ ဒါသိပ်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စပါ။ တာဝန်ရှိသူတွေတချို့ က ပြောကောင်းပြောမှာပေါ့။ ဒါက ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လိုက်လျောထားရတာလို့။ အဲဒီတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဘယ်လို ဆက်စပ်သလဲဆိုတာကို နည်းနည်းပြောပြပါ။
ဖြေ ။ ။ ဒီမြို့ သစ်စီမံကိန်းတွေက ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အကျိုးရှိမယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုယ်က ဒီပြဿနာရဲ့  တစိတ်တပိုင်းပဲလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေက လုံခြုံရေးကိစ္စအတွက် တနိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးကိုပဲ အာရုံစိုက်နေလို့ပါပဲ။ တပ်မတော်က လုံခြုံရေးကို ထိန်းချုပ်နေတာ ဖြစ်ပြီးတော့၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့  အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ကိစ္စတွေကို ထဲထဲဝင်ဝင် ဆွေးနွေးခွင့်မရအောင် ပိတ်ပင်နေခဲ့တာပါ။ အရပ်သားပြည်သူတွေ အနေနဲ့လဲ သူတို့ရဲ့  စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေကို ဒီငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့် မရကြပါဘူး။ လက်နက်ကိုင်တွေအတွက် သီးသန့်လိုဖြစ်နေတာပါ။ တပ်မတော်အပါအဝင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးချပြီးတော့ တိုင်းပြည်မှာ သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်အောင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ဘောင်ကို ကျယ်ပြန့်အောင် ချဲ့ ထွင်နေကြတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ရေရှည်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အလားအလာမကောင်းဘူးလို့ ကျမ ယူဆပါတယ်။
နိဂုံးကောက်နုတ်ချက် ။ ။ COVID-19 ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ နောက်ကြောင်းမရှင်းတဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီိတွေ ကရင်ပြည်နယ်မှာ နယ်မြေသစ်တွေ ရယူလာတဲ့အတွက်ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ လေ့လာစမ်းစစ်ချက် စာတမ်းရေးသားသူ Priscilla Clapp ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် ပထမပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ ဒီလုပ်ငန်းတွေက နိုင်ငံခြားအကျိုးစီးပွားနဲ့ ဘယ်လိုပတ်သက်နိုင်သလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဒီကိစ္စကို ရှောင်လွှဲနိုင်မလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Shwe Kokko City - Chinatown, Myawaddy, Kayin State. Photo credit: RFA
COVID-19 ကပျရောဂါ ဆိုကျနခြေိနျ နောကျကွောငျးမရှငျးတဲ့ တရုတျကုမ်ပဏီတှေ ကရငျပွညျနယျမှာ မွို့သဈတှေ တညျဆောကျလာတာဟာ ငွိမျးခမျြးရေးကိုတောငျ ခွိမျးခွောကျနိုငျတယျလို့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အမရေိကနျသံရုံး ယာယီတာဝနျခံဟောငျး Priscilla Clapp က လလေ့ာဆနျးစဈခကျြတစောငျ ထုတျပွနျလိုကျပါတယျ။ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီး Priscilla Clapp ကို ဦးကြျောဇံသာ ဆကျသှယျမေးမွနျးခကျြ (ပထမပိုငျး) ကို တငျပွထားပါတယျ။
မေး ။ ။ COVID-19 ကပျရောဂါ ဖွဈနခြေိနျမှာ နောကျကွောငျးမရှငျးတဲ့ တရုတျကုမ်ပဏီတှေ ကရငျပွညျနယျမှာ သီးသနျ့နယျမွေ ထူထောငျနကွေတာ ဒါက ငွိမျးခမျြးရေးကို ခွိမျးခွောကျနတေယျဆိုတော့ အတေျာ့ကိုထိတျလနျ့စရာကောငျးတဲ့ အခွအေနေ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနရောမှာ ကနြျောတို့ သိထားတာက ရှကေုက်ကိုလျမွို့တော့ သိပါတယျ။ ကနျြတဲ့မွို့တှအေကွောငျးတော့ ကနြျောတို့ မသိပါဘူး။ အဲဒါကို နညျးနညျးဆကျပွောပါ။
ဖွေ ။ ။ အထူးသဖွငျ့ ဒီမွို့သဈကွီးနှဈမွို့ တညျဆောကျလိုကျတာဟာ သိပျကိုစိတျပကျြဖို့ကောငျးပါတယျ။ ကမ်ဘာတဝှမျးမှာ သောငျးကနျြးနတေဲ့ သုံးပှငျ့ဆိုငျ တရုတျရာဇဝတျဂိုဏျဝငျတယောကျက ဦးဆောငျပွီးတော့ ဒီမွို့သဈတှကေို တညျဆောကျနတောပါ။ သူတို့တှကေ မူးယဈဆေးဝါး ရောငျးဝယျတယျ။ လူကုနျကူးတယျ။ လူသတျတယျ စတဲ့ ဒုစရိုကျမြိုးစုံကို လုပျပါတယျ။ ဒီလိုမွို့သဈတှေ တညျထောငျဖို့အတှကျ ကရငျနယျခွားစောငျ့တပျနဲ့ နောကျထပျသဘောတူစာခြုပျ ရေးထိုးလိုကျတဲ့ တရုတျကုမ်ပဏီပိုငျရှငျဟာဆိုရငျ မကာအိုမှာ လူသတျခဲ့လို့ တရုတျပွညျမှာ ထောငျ (၁၃) နှဈ ကခြဲ့တဲ့ လူသတျတရားခံ ဖွဈပါတယျ။ သူရေးတဲ့ သူ့ရဲ့ဘဝမှတျတမျးစာအုပျမှာဆိုရငျ လူကြူးလှနျခဲ့တဲ့ ပွဈမှုတှကေို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပဲ ရေးထားပါတယျ။
မေး ။ ။ အရှတေ့ောငျအာရှက ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံမှာလညျး Sihanoukville ဆိုပွီး မွို့သဈတဈမွို့ကို တရုတျက တညျဆောကျခဲ့တယျဆိုတာကို ကနြျောတို့ သိပါတယျ။ အပျေါယံအားဖွငျ့တော့ တျောတျောကို စညျးစညျးကားကား ရှိနတေယျဆိုတာကိုတော့ သိရပါတယျ။ ဆိုတော့ ဒီနရောမှာ ဘယျလိုပွဿနာတှေ ရှိခဲ့လဲ။ ရှိခဲ့တယျ့ဆိုရငျကော ဘယျလိုပွဿနာတှဆေိုတာကို နညျးနညျးပွောပွပေးပါ။ ဆကျစပျပွီးတော့ သိရအောငျပါ။
ဖွေ ။ ။ ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံမှာ Sihanoukville မွို့သဈထောငျတုနျးက သူခေါငျးဆောငျပွီးတော့ ရာဇဝတျမှုမြိုးစုံကို ကြူးလှနျခဲ့ဖူးပါတယျ။ နောကျဆုံး ဝနျကွီးခြုပျဟှနျဆနျက တရုတျရဲတပျဖှဲ့ကို အကူအညီတောငျးပွီးတော့ နှိမျးနငျးခဲ့ရတဲ့အထိပါပဲ။ တရုတျရာဇဝတျဂိုဏျတှေ လကျခကျြနဲ့ ကမ်ဘောဒီးယားရဲတှေ လမျးမပျေါတှမှော အတုံးအရုံး သဆေုံးနတေဲ့ပုံတှကေို အငျတာနကျမှာ တှနေို့ငျပါတယျ။ ဒါတှကေ တရုတျဂိုဏျတှရေဲ့ ရကျစကျပုံတှကေို အငျတာနကျကနေ အခမဲ့ ကွျောငွာပေးနသေလိုပေါ့။ ဒါကွောငျ့ ဒီနမူနာတှကေို ကွညျ့ပွီးတော့ မွနျမာပွညျရဲ့ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးအဖှဲ့တှကေ ဒီလိုမွို့သဈတှမှော ပွဈမှုတှေ ကြူးလှနျနတေဲ့ တရုတျရာဇဝတျဂိုဏျးတှကေို လကျလှမျးမီနိုငျပါ့မလားလို့ စိုးရိမျမိတာပါ။ ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံကနေ တပျခေါကျပွီး ပွေးလာတဲ့ တရုတျတှကေ အခု ကရငျပွညျနယျမှာ မွို့သဈထောငျနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ အခုမွို့သဈတှေ လုပျနတေဲ့နရောဘကျမှာ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့တှနေဲ့ တိုကျပှဲတှလေညျး မရှိတော့ဘူး မဟုတျလား။ အဲဒီတော့ အပဈအခတျရပျစဲရေးတှေ လုံးဝရယူထားပွီ ဖွဈတယျဆိုတော့ ဒီအခြိနျမှာ တရားဥပဒစေိုးမိုးမှုက လုံးဝမရှိနိုငျသေးဘူးဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။
ဖွေ ။ ။ ထိုငျး-မွနျမာနယျစပျတဝိုကျ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ ရထားတဲ့ အပဈရပျအဖှဲ့ နယျခွားစောငျ့တပျဖှဲ့ DKBA က တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးတာဝနျကို အဓိကတာဝနျယူထားရတဲ့သဘော ဖွဈနတေယျ။ ဒီလိုအခွအေနမြေိုးမှာ တရုတျတှကေ တမငျအခှငျ့ကောငျးယူတာပေါ့။ ဒုတိယမွောကျ မွို့သဈ ဆောကျလုပျနတေဲ့ KNU နယျမွမှောလညျး ဒီသဘောပါပဲ။
မေး ။ ။ နောကျ Priscilla ရေးထားတဲ့အထဲမှာ ဒီမွို့သဈစီမံကိနျးတှဟော မွနျမာနိုငျငံ ရငျးနှီးမွုပျနှံရငျးနှီးမွုပျနှံမှု (MIC) ရဲ့ သဘောတူညီမှုနဲ့ မွနျမာလှတျတျောရဲ့ သဘောတူညီမှုကော အသိအမှတျပွုမှု ရယူထားခွငျး မရှိဘူးလို့ ဖျောပွထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ ဆိုရငျ ဘယျလိုလုပျပွီးတော့ ဒီ စီမံကိနျးတှေ စတငျလာခဲ့ပါလဲ။
ဖွေ ။ ။ အားလုံးတော့ မဟုတျပါဘူး။ ကရငျပွညျနယျတှငျးက မွလှေတျမွရေိုငျးနရောတှမှော အိမျယာတှေ တညျဆောကျဖို့ဆိုပွီးတော့ မွနျမာ့ရငျးနှီးမွုပျနှံမှုကျောမရှငျကနေ ပထမစီမံကိနျးအတှကျ ပဏာမ သဘောတူခှငျ့ပွုခဲ့တာ ကွာခဲ့ပါပွီ။ ဒါပမေဲ့ တရုတျတှကေ သတျမှတျထားတဲ့ မွအေကယျြအဝနျးထကျ ပိုတိုးခြဲ့ပွီးတော့ Casino လောငျးကစားရုံတှကေိုပါ ခှငျ့ပွုခကျြမရှိဘဲ ဆောကျလုပျခဲ့တာပါ။ နပွေညျတျောက အရပျသားအစိုးရမှာ လုပျပိုငျခှငျ့အာဏာ ရှိတယျလို့ ကမြ မထငျပါဘူး။ သူတို့နဲ့ ဆကျဆံရေးအခွအေနကေို ပွောပွဖို့ကလဲ ခကျပါတယျ။ တရုတျနိုငျငံ ယူနနျပွညျနယျနဲ့ တခွားဒသေက အဖှဲ့အစညျးတှရေဲ့ ကိုယျစားဆိုပွီးတော့ ကရငျပွညျနယျအတှကျ ငှကွေေးနဲ့ ဆေးပစ်စညျးတှကေို ဝနျကွီးခြုပျဆီကနေ မကျြနှာသာရအောငျ လှုဒါနျးနတောတှေ ရှိပါတယျ။ ယူနနျအစိုးရနဲ့ ပတျသကျနတောလဲ ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျတယျ။ တပျအပျတော့ မပွောနိုငျပမေယျ့ ဆနျးတော့ဆနျးတယျလို့ ပွောရမှာပေါ့။ စဈတပျအုပျခြုပျမှုအောကျက တရားဥပဒစေိုးမိုးရေး ရဲတပျဖှဲ့ကနေ တရုတျရာဇဝတျဂိုဏျးတှကေို ဘာမှမလုပျဘဲ လကျပိုကျကွညျ့နတောကတော့ စိတျပကျြစရာ ကောငျးပါတယျ။
နယျခွားစောငျ့တပျဆိုတာလဲ တပျမတျောရဲ့ လကျအောကျခံ ပွညျသူ့စဈ ဖွဈသလို၊ နယျစပျလုံခွုံရေးဝနျကွီးဌာန လကျအောကျက ဖွဈပါတယျ။ နယျခွားစောငျ့တပျ လုပျသမြှက တပျမတျောနဲ့ ဆကျစပျနတေယျလို့ အဓိပ်ပါယျဖှငျ့လို့ရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီမွို့သဈကွီးနှဈမွို့ တညျဆောကျနတေဲ့ KNU ရဲ့ လှုပျရှားမှုတှမှော စဈတပျက တနညျးမဟုတျတနညျး ပတျသကျနတေယျလို့ ယူဆနိုငျပါတယျ။ ဥပဒဘေောငျပွငျပကနေ KNU လုပျခှငျ့ပေးထားနိုငျတာက စဈတပျပဲ ရှိပါတယျ။
မေး ။ ။ အဲဒီလို တခြို့အရာတှကေ ခှငျ့ပွုခကျြနဲ့ လုပျတယျပဲ ထားပါတော့ သတျမှတျထားတဲ့ ဘောငျအတှငျးက လုပျပွတာ ဟုတျမဟုတျဆိုတာကိုကော အစိုးရက စောငျ့ကွညျ့စဈဆေးတာ monitory လုပျတာကော မရှိဘူးလား။
ဖွေ ။ ။ နပွေညျတျောအစိုးရနဲ့ ကရငျပွညျနယျ အရပျသားအစိုးရဆီတို့မှာ ဒီမွို့သဈတှနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ လုပျပိုငျခှငျ့အာဏာ ရှိတယျလို့ ကမြ မထငျပါဘူး။ သူတို့နဲ့ ဆကျဆံရေးအခွအေနကေို ပွောပွဖို့ကလဲ ခကျပါတယျ။ တရုတျနိုငျငံ ယူနနျပွညျနယျနဲ့ တခွားပွညျနယျက အဖှဲ့အစညျးတှရေဲ့ ကိုယျစားဆိုပွီးတော့ ကရငျပွညျနယျအတှကျ ငှကွေေးနဲ့ ဆေးပစ်စညျးတှကေို ဝနျကွီးခြုပျဆီက မကျြနှာသာရအောငျ လှုဒါနျးနတောတှေ ရှိပါတယျ။ ယူနနျအစိုးရနဲ့ ပတျသကျနတောလညျး ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျတယျ။ တပျအပျတော့ မပွောနိုငျပမေယျ့ ဆနျးတော့ဆနျးတယျလို့ ပွောရမှာပေါ့။ စဈတပျအုပျခြုပျမှုအောကျက တရားဥပဒစေိုးမိုးရေး ရဲတပျဖှဲ့ကလညျး တရုတျရာဇဝတျဂိုဏျးတှကေို ဘာမှမလုပျဘဲ လကျပိုကျကွညျ့နတောကတော့ စိတျပကျြစရာ ကောငျးပါတယျ။
မေး ။ ။ အဲဒီလိုဆိုရငျ ဒီကိစ်စမှာ တပျမတျော၊ ဒါမှမဟုတျလဲ အဲဒီဒသေမှာ တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ မွနျမာစဈတပျက သူတို့ကိုယျတိုငျ ဒီလုပျငနျးတှမှော ပါဝငျပတျသကျနတေယျလို့ ပွောနိုငျသလား။
ဖွေ ။ ။ နယျခွားစောငျ့တပျဆိုတာလဲ တပျမတျောရဲ့ လကျအောကျခံ ပွညျသူ့စဈဖွဈသလို၊ နယျခွားလုံခွုံရေးဝနျကွီးဌာနလကျအောကျကပါ။ နယျခွားစောငျ့တပျ လုပျသမြှ တပျမတျောနဲ့ ဆကျစပျနတေယျလို့လဲ အဓိပ်ပါယျဖှငျ့လို့ ရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီမွို့သဈကွီးနှဈမွို့ တညျဆောကျနတေဲ့ KNU ရဲ့ လှုပျရှားမှုတှမှော စဈတပျက တနညျးမဟုတျတနညျး ပတျသကျနတေယျလို့ ယူဆနိုငျပါတယျ။ ဥပဒဘေောငျ ပွငျပကနေ KNU ကို လုပျခှငျ့ပေးထားနိုငျတာကလဲ စဈတပျပဲ ရှိပါတယျ။
မေး ။ ။ ကနြျော ဆကျစပျပွီး မေးခငျြပါတယျ။ တကယျတော့ ရှမျးပွညျဘကျမှာ အခွစေိုကျတဲ့ KIO ခှဲထှကျအဖှဲ့တဖှဲ့ သူတို့တှလေညျး အပဈရပျပွီးတော့ နယျခွားစောငျ့တပျ BGF လုပျနတေယျ။ အဲဒီတပျဖှဲ့က တလောတုနျးက မူးယဈဆေးဝါးတှေ လုပျနတေယျဆိုပွီးတော့ တပျမတျောက သူတို့ကို လကျနကျဖွုတျသိမျး ထိနျးခြုပျလိုကျတယျလို့ သိရပါတယျ။ အခု ကရငျပွညျနယျမှာ ဖွဈနတေဲ့ကိစ်စကိုရော ရာဇဝတျမှုတှေ မကငျးတဲ့ကိစ်စတှဆေိုတော့ ဒီက BGF ကို တပျမတျောက အလားတူထိနျးခြုပျမှုတှေ မလုပျနိုငျဘူးလား။ ဘာကွောငျ့ မလုပျတာလဲ။ သိရငျ ပွောပါ။
ဖွေ ။ ။ မွနျမာပွညျရဲ့ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးကို ကမြ ထဲထဲဝငျဝငျ မသိပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဒီမွို့သဈတှရေဲ့ အခွအေနကေ သိပျအန်တရာယျ ရှိတယျလို့ ပွောနိုငျပါတယျ။ ဒါဟာ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒကေ စရေးထားတဲ့ ခွားနားတဲ့ မတူညီတဲ့ အစိုးရနှဈရပျ ရှိနတေယျဆိုတာကို ပုံဖျောလိုကျတဲ့ သဘောပါပဲ။ တဘကျက တပျမတျောအပါအဝငျ လကျနကျကိုငျတှေ ထိနျးခြုပျတဲ့ အစိုးရနဲ့ နောကျတဘကျက ပွညျသူတှရှေေးကောကျထားတဲ့ အရပျသားအစိုးရ ဖွဈပါတယျ။ ရှေးကောကျခံအရပျသားအစိုးရက ရငျးနှီးမွုပျနှံမှု စီးပှားရေးနယျပယျကို စနဈတကဖြွဈအောငျ ကွိုးစားနပွေီးတော့ အထိုကျအလြောကျ အောငျမွငျနတော တှရေ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အစိုးရလကျလှမျးမမီတဲ့ နရောတှမှော တခွားအဖှဲ့က ဥပဒမေဲ့ အခှငျ့ကောငျးယူ၊ တိုးခြဲ့လုပျကိုငျနတောကတော့ နိုငျငံမှာ မတူညီ၊ ကှဲပွားခွားနားနတေဲ့ အစိုးရနှဈရပျ ရှိနတေယျဆိုတာကို ပုံဖျောပွသနပေါတယျ။
မေး ။ ။ Priscilla ရေးထားတဲ့ ခေါငျးစဉျထဲမှာကိုက ဒီလုပျရပျတှကေ ငွိမျးခမျြးရေးကို ခွိမျးခွောကျနတေယျဆိုတာ ဒါသိပျအရေးကွီးတဲ့ ကိစ်စပါ။ တာဝနျရှိသူတှတေခြို့က ပွောကောငျးပွောမှာပေါ့။ ဒါက ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ လိုကျလြောထားရတာလို့။ အဲဒီတော့ ငွိမျးခမျြးရေးနဲ့ ဘယျလို ဆကျစပျသလဲဆိုတာကို နညျးနညျးပွောပွပါ။
ဖွေ ။ ။ ဒီမွို့သဈစီမံကိနျးတှကေ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ အကြိုးရှိမယျလို့ မထငျပါဘူး။ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျကိုယျက ဒီပွဿနာရဲ့ တစိတျတပိုငျးပဲလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျတှကေ လုံခွုံရေးကိစ်စအတှကျ တနိုငျငံလုံး အပဈခတျရပျစဲရေးကိုပဲ အာရုံစိုကျနလေို့ပါပဲ။ တပျမတျောက လုံခွုံရေးကို ထိနျးခြုပျနတော ဖွဈပွီးတော့၊ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျရဲ့ အစိတျအပိုငျးတှဖွေဈတဲ့ နိုငျငံရေး၊ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေး ကိစ်စတှကေို ထဲထဲဝငျဝငျ ဆှေးနှေးခှငျ့မရအောငျ ပိတျပငျနခေဲ့တာပါ။ အရပျသားပွညျသူတှေ အနနေဲ့လဲ သူတို့ရဲ့ စိုးရိမျကွောငျ့ကွမှုတှကေို ဒီငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျတှမှော ပါဝငျဆှေးနှေးခှငျ့ မရကွပါဘူး။ လကျနကျကိုငျတှအေတှကျ သီးသနျ့လိုဖွဈနတောပါ။ တပျမတျောအပါအဝငျ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့တှကေ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျကို အသုံးခပြွီးတော့ တိုငျးပွညျမှာ သွဇာလှမျးမိုးနိုငျအောငျ လုပျပိုငျခှငျ့ဘောငျကို ကယျြပွနျ့အောငျ ခြဲ့ထှငျနကွေတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ ရရှေညျမှာ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ အလားအလာမကောငျးဘူးလို့ ကမြ ယူဆပါတယျ။
နိဂုံးကောကျနုတျခကျြ ။ ။ COVID-19 ကပျရောဂါ ဖွဈပှားနခြေိနျမှာ နောကျကွောငျးမရှငျးတဲ့ တရုတျကုမ်ပဏီတှေ ကရငျပွညျနယျမှာ နယျမွသေဈတှေ ရယူလာတဲ့အတှကျကွောငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ အန်တရာယျဖွဈလာနိုငျတယျဆိုတဲ့ လလေ့ာစမျးစဈခကျြ စာတမျးရေးသားသူ Priscilla Clapp ကို ဆကျသှယျမေးမွနျးခကျြ ပထမပိုငျး ဖွဈပါတယျ။ ဒုတိယပိုငျးမှာတော့ ဒီလုပျငနျးတှကေ နိုငျငံခွားအကြိုးစီးပှားနဲ့ ဘယျလိုပတျသကျနိုငျသလဲ။ မွနျမာနိုငျငံအနနေဲ့ ဘယျလိုနညျးနဲ့ ဒီကိစ်စကို ရှောငျလှဲနိုငျမလဲဆိုတာကို ဆကျလကျဆှေးနှေးထားပါတယျ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။
Shwe Kokko City Map, Myawaddy, Kayin State. Photo credit: Mizzima News